भारत एकैपटक चीन र पाकिस्तानसँग लड्न सक्छ ? कसको सक्ति कति ? - Prahar News
भारतीय सेनाका लागि गत ५० वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो डर हो– कतै चीन र पाकिस्तानसँग एकै पटक दुई मोर्चामा युद्ध लड्नु पर्ने हो कि१ देशको विशाल आकार, सैन्य शक्ति र अन्ततः आणविक शक्ति पनि हासिल गरेपछि नयाँ दिल्ली विश्वस्त थियोे– ऊ यी दुईमध्ये जुनसुकै एक छिमेकीसँगको द्वन्द्व रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
तर, यी दुवै दुश्मन मुलुकसँग एकै पटक लड्न भने भारतको स्रोतसाधनले भ्याउँदैन र त्यो निकै ठूलो चुनौती बन्नेछ। दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारका कारण भारत यो दुस्वप्नको नजिक पुगेको छ । पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ ।
चीनसँगको भारत सीमा विवाद दशकौँपछि यही बर्खामा हिंसात्मक बन्न पुग्यो। यो दुश्मनी समाप्त हुने कुनै लक्षण देखिन्न। अर्कोतिर कस्मिरमा पनि आन्तरिक मोर्चा खुल्न सक्छ। किनभने गतवर्ष सरकारले कडा सुरक्षा लागू गरेपछि त्यहाँ भारतविरोधी भावना उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ ।
यसबेला सीमामा चीन प्रमुख आक्रमणकारी बनेर आउँदा नयाँ दिल्लीले दुई र अर्को आधा मोर्चामा एकै पटक लड्नुपर्ने वास्तविक खतराको सामना गर्नुप¥यो। यसको नतिजा भारतका लागि भयंकर हुने थियो। नयाँ दिल्लीको राजनीतिक ध्यान, सैन्य अडान र कूटनीतिक प्रयास कमजोर हुने थियो। दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर शक्ति विस्तार गर्ने र विश्व मञ्चमा भूमिका बढाउने भारतको चाहना स्थगित हुने थियो ।
चीनसँग भने कम्तीमा ३० दिनको सघन युद्धका लागि तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्को शब्दमा भन्दा २०१९ को अन्त्यमा पनि भारतसँग भएको गोलीगठ्ठाले पाकिस्तानसँग १० दिन मात्र सघन युद्ध लड्न पुग्छ। चीनसँगको सैन्य द्वन्द्वका लागि गोलीगठ्ठाको भण्डार बढाउने काम बल्ल सुरु भएको छ। त्यो पनि गत मे महिनामा लद्दाखमा तनाव उत्पन्न नहुन्जेल सुरु नगरिएको हुनसक्छ। फलस्वरुप जुन महिनामा सरकारले सेनाको आपतकालीन खरिद अधिकार बढाइदियो ।
मंगलवार, भाद्र ३० २०७७०९:४८:३८
अमेरिकामा डडेलोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८ पुग्यो, दर्जनौँ अझै सम्पर्कबाहिर